အားလုံးသိချင်နေကြတဲ့ (၁၀)ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ထွက်လာပါပြီ - MM Live News
အားလုံးသိချင်နေကြတဲ့ (၁၀)ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ထွက်လာပါပြီ
ထီဖွင့်ပြီး သုံးရက်ကြာသည်အထိ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင် ထွက်ပေါ်မလာသေးလို့ အားလုံးက သိချင်နေကြတဲ့ (၁၀)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ထွက်လာပါပြီ။
အဆိုဘာ (၁၀)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် သည် မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ဌက်ပျောတောကျေးရွာအောက်စု မှ ဒေါ်ထိုက် မှ သိန်း ၁၅၀၀၀. ဆုကြီး ထိုက်တန်စွာ ဆုခူးပေးလိုက်ပြီဖြစ်ောကာင်း သိရပါတယ်။ မိသားစုဆွေမျိုးများနဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းသာမိပါသည်။
(၁၀)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်ဆုရှက်ကတော့ မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မဟာနွယ်ဇင် ရပ်ကွက်နေ ကိုစိုင်းဆန်းညွန့် + မဆွေဇင်ထူး တို့ရဲ့ သားလေး မောင်အောင်ကောင်းစံ အမည်ဖြင့် ပေါက်ဂဏန်း နံပါတ် – (ကခ ၄၈၄၅၀၅) ဖြင့် ကံထူးစွာ ဆွတ်ခူးရရှိကြောင်း သိရပါသည်။
အားလံုးသိခ်င္ေနၾကတဲ့ (၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ကံထူး႐ွင္ ထြက္လာပါၿပီ
ထီဖြင့္ၿပီး သံုးရက္ၾကာသည္အထိ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုရွင္ ထြက္ေပၚမလာေသးလို႔ အားလံုးက သိခ်င္ေနၾကတဲ့ (၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ကံထူး႐ွင္ ထြက္လာပါၿပီ။
အဆိုဘာ (၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ကံထူး႐ွင္ သည္ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ဌက္ေပ်ာေတာေက်းရြာေအာက္စု မွ ေဒၚထိုက္ မွ သိန္း ၁၅၀၀၀. ဆုႀကီး ထိုက္တန္စြာ ဆုခူးေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ောကာင္း သိရပါတယ္။ မိသားစုေဆြမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ ထပ္တူ ဝမ္းသာမိပါသည္။
အင်္ဂါ သားသမီးလေးတွေ အအကြောင်း…
အဘိုးဖြစ်သူမှ ၁၄နှစ်အရွယ် မြေးမလေးအား ညစဉ်(၁၅)ရက်ခန့် အလိုမတူဘဲ ပြုကျင့်…
ကျားဖောင်(သို့မဟုတ်)ငရဲခန်း(ဒါမှမဟုတ်)အစိုးရအာဏာမဲ့နေတဲ့ ဖျာပုံမြို့က လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ရာနေရာ
November 23, 2019 MM Live
November 12, 2019 November 12, 2019 MM Live